Momba anay | Amso Solar Technology Co., Ltd.
Amso Solar Technology Co., Ltd.dia mpamokatra panneaux solaires izay novolavolaina nandritra ny 12 taona. Manana traikefa feno amin'ny serivisy OEM sy ODM izahay. Nandritra ny taona lasa, nanangana orinasa tery izahay miaraka amina marika maro sy mpanamboatra ambaratonga voalohany. Niorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2017 izahay mba hitondra ny marika manokana: Amso Solar. Ny orinasa misy anay dia mifanila amin'ny farihy HongZe tsara tarehy, izay any Huaian, JiangSu, Sina.
Amso Solar dia manokana amin'ny famokarana sela sy masoandro panneaux solaires izay niantoka ny antoka tamin'ny 25 taona. Ny tsipika famokarana tontolon'ny masoandro dia manarona ny andian-dahatsoratra 5BB sy 9BB, elanelam-potoana manomboka amin'ny 5w ka hatramin'ny 600w, ary mamarana ny tontolon'ny masoandro voaorina, manara-penitra ny tontolon'ny masoandro ary ny tontolon'ny masoandro antsasaky ny sela. Ao amin'ny fijerin'ny haben'ny sela, dia ampiasain'ny sela solar telo lehibe amin'ny famokarana tontolon'ny masoandro: M2 156.75mm, G1 158.75mm, ary M6 166mm.
Mba hanomezana fahafaham-po ny traikefa fiantsenana tokana an'ny mpanjifa, dia nanangana orinasa fanampiny izahay mba hanomezana singa ao amin'ny tontolon'ny masoandro, toy ny PWM sy MPPT mpanara-maso, bateria-asidra, gel ary lithium bateria, mpanelanelana amin'ny takelaka ary fampidirana an-tserasera. Mandritra izany fotoana izany, manome endrika endrika matihanina iray manontolo ihany koa izahay ary mizara serivisy momba ny rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro ary ivelan'ny kianja.
Mba hijerena ny tsena manerantany dia nahazo mari-pankasitrahana vitsivitsy izahay mba hihaona amin'ny fepetra takiana isan-karazany toy ny CE, TUV, CQC, SGS, CNAS. Izahay dia mitazona fari-pitsipika avo lenta momba ny fisafidianana fitaovana, nampiditra fitaovana manerantany, ary manatanteraka rafitra fanaraha-maso kalitao mba hahazoana antoka fa mendrika ny vokatra tsirairay avy amin'ny Amso Solar. Ny fahaizantsika modules isan-taona dia mahatratra 1 0 0 megawatt. Ireo tsenanay lehibe dia misy an'i Azia atsimo atsinanana, Eoropa ary Afovoany Atsinanana.
Ny vinanay dia ny fanaparitahana ny fampiharana ny angovo avy amin'ny masoandro ary hahatonga ny fampiasana an'io loharano azo havaozina io ho azo atao. Inoanay fa ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa dia tsy maintsy mitondra tombony samy izy ary tokony hikatsaka fiaraha-miasa maharitra. Amso Solar mikaroka am-pahatsorana ny fanontanianao ary vonona ny hanome vahaolana ara-teknika amin'ny angovo masoandro.